Toamasina I : takina vola ny mpampianatra tsy te hifindra toerana (NewsMada) | AEMW
Toamasina I : takina vola ny mpampianatra tsy te hifindra toerana (NewsMada)
Any Taolagnaro, mandritra ny fanatanterahana ny fanatanjahantena an-tsekoly, no manao fihaonana ireo lehiben’ny fari-piadidiam-pampianarana 114 sy ny talem-paritry ny fanabeazam-pirenena enina ary ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena, Rabary Paul.
Nilaza ny minisitra fa be loatra ny fisehoan’ny kolikoly eo anivon’ny fari-piadidiam-pampianarana. Mitazona ny laharana fahatelo mihitsy. Miseho izany amin’ ny fotoan’ny fanadinana CEPE sy BEPC sy amin’ny famindran-toerana ny mpampianatra. Momba ny famindran-toerana, mitaraina ny mpampianatra maromaro eo anivon’ny fari-piadidiam-pampianarana ao Toamasina I fa itakiana hakana vola hatramin’ny 300.000 Ar tsirairay raha tsy te handeha hifindra toeram-piasana. Vokany, nampitandrina ny minisitra fa raha mitohy ny fandraisana fitarainana avy amin’ny olon-tsotra sy mpampianatra ary olom-boafidy amin’ny fomba fihetsiky ny lehiben’ny fari-piadidiam-pampianarana sy ny talem-paritry ny fanabeaza-pirenena, hisy ny fanesorana sy famindran-toerana faobe ato ho ato.
Nohenoin’ny minisitra ireo olana mianjady amin’ ireo tompon’ andraikitra isaky ny fari-piadidiam-pampianarana. Nisongadina avy tamin’ ireo nandray fitenenana fa misy ny olana ara-bola tsy ampy entina hampandeha ny raharaham-pampianarana sy hanaramana ny mpampianatra Fram mbola tsy tafiditra ho mpiasam-panjakana. Fahatelo, ny fandehanan’ny mpamily sy mpiasa birao hisotro ronono maromaro ato ho ato.
← Tsy fandoavana hofan-trano sy tany : noraisin’ny Spat ny taniny eny Anjoma (NewsMada)
Fenoarivo Atsinanana : pretra sy diakra 11 nohamasinina (NewsMada) →